पोखरा वसपार्कको निर्माण कहिले ? | eAdarsha.com
पोखरा वसपार्कको निर्माण कहिले ?
१. नया संविधान निर्माण भएपछि देशमा नया संरचना बनेको छ । नया संरचना अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि एक वर्ष वितिसकेको छ । यस बीच पोखरा उपमहानगरपलिका पनि पोखरा महानगरपालिकामा स्तरोन्नति भएको छ । नया संरचना अनुसार गण्डकी प्रदेशको सरकार बनेको छ । पहिले झैँ पोखरा नगर योजना समिति पनि छ ।
२. पोखराको विकास निर्माणका लागि सबै अंगहरु पूरा भएको अवस्था छ । ती अंगहरुले आआफना विकासका बजेटहरु पास गरेर लागू गरिसकेका पनि छन् । पोखरालाई पर्यटकीय हब बनाउने कुरा पनि भएको छ । पोखराको निर्माण र विकासका लागि धेरैले धेरै कुरा गरेका छन् ।
३. राजनीतिक पार्टी र उम्मेदवारका घोषणापत्र हरियो भने हामी त्यसमा धेरै प्रतिबद्धताहरु देख्दछौँ । तिनीहरुले वीसौँ वर्षदेखि प्रतिबद्धता जाहेर गरेर पनि ती कामहरु नगरेका धेरै उदाहरणहरु छन् । तिनीहरुले ती कामकुराहरु किन गरेनन् त्यो उनीहरुको आफनै कुरा होला । तिनीहरुले ती कामकुराहरु आफनै घोषणापत्रमा हेरे प्रष्ट हुने छ ।
४. ती मध्ये एउटा कुरा हाम्रो पनि चासोको विषय भएकोले यहाँ चर्चा गर्ने जमको गरिएको छ । त्यो हो पोखराको वस पार्क । पोखराको वसपार्क निर्माण गर्ने सबै राजनीतिक पार्टी र जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिबद्धता हो । सबैले यसको निर्माण गर्ने आवश्यकता पनि संझन्छन् । निर्माणको चर्चा गर्दा तुरुन्त बनाउनु पर्ने विचार पनि व्यक्त गर्दछन् तर बनाउँदैनन् ।
५. यस्तो गर्दा गर्दै वीसौँ वर्ष वितिसकेको छ । यो वस पार्कले हाम्रा विकासका अभियन्ताहरुलाई सधैँ औँला ठड्याएर गिज्यइरहेको छ । हामीले कुन गतिले कसरी काम गर्दैछौँ भन्ने यो एक नमूना भएको छ । शुरुमा पदाधिकारी भएर आउँदा सबैले केकेन गरेझैँ यता उता गर्दछन् । तर समय बित्दै गएपछि यसलाई विर्सन्छन् ।
६. पोखराको समग्र विकासका लागि धेरै गोष्ठी सेमिनारहरु भएका छन् । स्मार्ट सिटी लगायतका कुराहरु उठ्ने गरेका छन् , त्यही अनुसारका भाषणहरु भएका छन् । तर पोखराको वस पार्क बनाउने कुरा सधैँ ओझेलमा पर्ने गरेको छ । किन यस्तो भइरहेको छ यो एउटा आर्श्चर्यको कुरा हुनगएको छ ।
७. के पोखरामा वसपार्क आवश्यक छैन ? के यो हामी सबैको चासोको विषय होइन ? के यो वस पार्क बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता होइन ? हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु छन् , हाम्रो महानगरपालिका छ , गण्डकी प्रदेशको सरकार छ । केन्द्रीय पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री पोखराकै छन् । यी सबै भएर पनि वस पार्क वेवारिसेजस्तो भएको छ । यो वसपार्कप्रति अन्याय भएको छ ,अत्याचार भएको छ । अति भएको छ । अति सर्वत्र वर्जयेत् भन्ने उक्तिलाई महसुस गरी यथाशीघ्र यसको निर्माण शुरु गर्न हामी जोडदार आह्वान गर्दछौँ ।
श्रीलंकामा राजनीतिक परिवर्तन
१. श्रीलंकाको राजनीतिक परिदृश्य छिट्छिटो परिवर्तन भएको छ। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना र प्रधानमन्त्री भएका रणिल विक्रम सिंघेबीच विवाद बढेपछि राजनीतिक परिदृश्य त्यसरी परिवर्तन भएको हो। त्यो परिवर्तन कहाँ गएर कसरी टुङगिन्छ, त्यो यसै भन्न सकिने स्थिति छैन। त्यसको लागि केही समय कुर्नु…